Abafileyo bokuhlaselwa e-Utrecht bafaka ubungqina bokuthi akunakuba yi-PsyOp? : UMartin Vrijland
Abafileyo bokuhlaselwa e-Utrecht bafaka ubungqina bokuthi akunakuba yi-PsyOp?
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	19 Matshi 2019	• 32 Comments
Nangona yonke into ibonakala ibe yi-PsyOp ngexesha elifanelekileyo (ukusebenza kwengqondo) apha, usuku olungaphambi ko lonyulo, kukho amabali athembekileyo malunga nokufa kwangempela. Uvaphi na ukuwabona loo mabali? Kunene: kumajelo. Kwaye uyazibona nakwiimidiya zentlalo "iiprofayili zangempela" kunye nabahlobo bokwenene kunye nosapho okhusela ukuba bayazi amaxhoba kunye neentsapho zabo. Ngokuqinisekileyo kufuneka uzinqume ukuba ngaba ukholelwa ekuhlaselweni okanye akunjalo, kodwa ndiqhubeka ndibonisa izibonelelo kunye namathuba abo oorhulumente kunye nemidiya ezandleni zabo zokudlala nabantu. Ziyakwenza iiprojethi zentlalo yoluntu ngokupheleleyo ngaphandle kwebluhlaza (kodwa ngenethwekhi enokwethenjelwa). Kwaye ke awukwazi ukusho ngokuqinisekileyo okanye abo baphendula kwisithuba sakho se-Facebook kunye nezimvo ezifana 'Inyaniso ngokwenene kuba bam bamelwane"Okanye"Ndiyazi loo ndoda kuba unyana wam esikolweni apho"(Njalo njalo) ngokwenene ngabantu. Kwaye sinakho inethiwekhi enkulu Inoffizieller Mitarbeiter iidubhu ingqungquthela yesingqina xa kufuneka.
Iimidiya zihamba phambili ngetyaba loorhulumente kwaye zibonisa abantu kunye nemifanekiso abanako (kwaye bafuna ukubonisa) ukukhokela ukucinga kwakho kwehlabathi. Ukususela kwimidiya yoluntu esinazo (ngeendaba ezifanayo) ngoluvo lokuba kukho onke amabutho aseRashiya aseTroyra athatha impembelelo kwi-Facebook nakwi-Twitter kunye neeprofayili ezingamanga, kodwa ukuba oku kubangelwe kwenzeka kwakhona, ewe, iphikisiwe. Enyanisweni, unako ukusho ukuba zonke iindlela zobugcisa zikhona ukuba zibeke yonke into kwindawo kwaye zibone ukulawulwa kwengcamango ngokubambisana nakumajelo aseburhulumenteni nakwizentlalo ezisezantsi. Kwakhona kunokwenzeka ukuba i-PsyOp isebenza nje nabantu abayekekisayo. Oku kungafaka isicelo kubo bobabini ababubi kunye namaxhoba (kunye namangqina). Kukho umxokelelo wemali kufuneka udibanise ngenye indlela, kuba kufuneka unike abantu ubunikazi obutsha kunye nobukho ezweni elikude apho kuyimfuneko. Nangona kunjalo, ukubaluleka kunye nempembelelo yaloo misebenzi inkulu kwaye ngoko unokulindela ukuba inokuhlawula ixabiso elincinci. Emva koko, kukungeniswa kokungenakulungiswa kwamanyathelo karhulumente amapolisa angasetyenziswa ukulawula izigidi.
Nangona kunjalo, xa sibona imifanekiso yezizalwane okanye izihlobo ezibuhlungu, iimvakalelo zithatha ngokukhawuleza kwaye sikhetha ukuphonsa ingcinga yokuba kukho i-PsyOp kwinqwelo. Unentsikelelo yam, kodwa ndicinga ukuba kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ngokwezemfundo nakwezemali akukho nto yokuma endleleni yokudlala ngeendaba ezibuxoki ngokubanzi kwiindlela eziqhelekileyo. Emva koko, kuvela kwi-pot yerhafu.
Kwakukho, nokuba kunjalo, ngokuphawulekayo ukuba kwakukho isiteleka sikawonkewonke sothutho loluntu kwaye abaninzi abantu bahlala ekhaya ngenxa yoko. Indawo yokuhlaselwa yayiyinto ephawulekayo, kuba yayisona ngundoqo (kutheni ungakhethi iziko?). Ngaphezu koko, impembelelo yokuhlaselwa okusemthethweni kwosuku lokutshitshiswa kwamagqabi akunakulindelwa ukuba lube lukhulu kangangoko ukuba ukhethe usuku oluqhelekileyo lomsebenzi kunye nendawo exakekileyo. Amabali amangqina ayengacacanga, adala ukucinga ukuba ayikabi kakhulu, kodwa yintoni eyenzekayo? Ngaba le ntokazi yayidutshulwa kwiTram kwaye yabona loo mfazi elele apho? Ngaba uGökmen Tanis wadubula ngefestile esuka kwiTram? Lowo uva plop plop plop (silencer) kunye nolunye uvile pang pang pang (akukho damper). Ngoko udubula umntu e-tram; ngoko ukuxakeka kwexesha eliphuthumayo kutyalwa (okanye i-bram driver drivers), kodwa lona wesifazane sele sele sele esondele (okanye ngasemva?) itram kwaye wonke umntu uya ngaphandle kwaye uGökmen uqala ukudubula kwakhona? Loo ntokazi wayiphuma njani kwiTram? Kwaye kutheni ukuba ahambe ngaphandle kwetram phakathi kwe24 Oktoberplein? Okanye ngaba waxhuma ngaphandle xa iingcango zivaliwe? Okanye ngaba uTanis wamdubula ngaphandle kwetram kwaye wangena (ngoxa iingcango zavalwa kwaye i-tram iyasebenza) kwaye waphuma kwakhona? Isangqa (ukuba akunakwenzeka) kunye nebali elingacacanga, awucingi na?
UNgqina uDaniel uDolenaar udlala indima ebalulekileyo kule ndaba. Ngendlela, kutheni kukho kuphela amaNgqina e-2 kumajelo? Ngokuqinisekileyo i-tram (kwisithuthi somntu wesantya sosuku) yayineenqwelo ezininzi eziye zabona into? UDaniel Molenaar ungufakazi obangel 'umdla. Ulandele ikhosi kwiYunivesithi yaseUtrecht kwaye kungekhona nje ikhosi. Wafunda iNew Media kunye neNkcubeko yeNkcubeko. Ngoko ke kufuneka ukuba azi izinto eziyimfuneko malunga nendlela wena fakes Unokwenza, kodwa ngaphandle. IYunivesithi yaseUtrecht yinqaba yaseProf. dr. ngudla. UBeatrice de Graaf (igama elihle lekhosi). Ku-2004 wathola i-PhD yakhe kwiYunivesithi yase-Utrecht ngokusasazwa nge-GDR, into ekhangeleka kakhulu, kuba eli lixesha le-Inoffizieller Mitarbeiter. Abantu ngokwenene badlala indima ephindwe kabini kwinkonzo ye-East Germany. Ingcamango yokuba oku kuyenzeki eNetherlands kwaye ukuba le ngqungquthela ishiywe ngokupheleleyo mhlawumbi yinto enkulu yokucinga ukuba kufuneka siphume.
Olunye ubungqina yinkwenkwe egama linguNicky van Grinsven. Olu bungqina lunokuthi luchaze ibali elithi 'Allah Akbar'. Uvile le Gökmen Tanis uthi (ngokungafani noDaniel Molenaar). U-Tanis kufuneka ukuba ube ngumqhubi ombi ukufumana uNicky kwiimitha ze-15 (ubone ibali lakhe Nieuwsuur). Ukuba udubula, yenza okulungileyo, utsho. Kodwa ibali lika-Allah Akbar lilungele ukutya kokudideka "Ngaba iyothuswa ngoku okanye ayikho kwaye mhlawumbi i-jihadist iphosa?". Kwaye oku kukutya okulungileyo ukuvuselela umda okhohlo kunye nolungileyo kummandla wezopolitiko (kunye neegusha) baqhubeka bevota ngethemba eliyinyaniso lamaqela angabonakalisa okwangoku ngeli xesha).
Singaqinisekisa ngokuqinisekileyo ukuba ukuhlaselwa okunjalo kuqinisekisa kwakhona imfuno yamanyathelo omaphekula. Ezinye izixhobo ezitsha ziye zaziswa, ezifana nokulayisha imifanekiso yefowuni kwisayithi yamapolisa (kwaye kungekhona kumacandelo olwazi; funda 'ukucandwa'), ukufakwa kwekbenveilig.nl kunye Inkinobho yokukhangela ukhuseleko lwe-Facebook apho unokuvumela abahlobo bakho ukuba bazi 1x ukuba usaphila (funda 'idatha enkulu'). Ngethuba lokuqala, amapolisa asebenzisa i-drones ukukhangela umenzi wobubi kwaye urhulumente wakwazi ukuvavanya indlela abemi abahlala ngayo ngaphakathi emva kokufowunelwa nokuphunyezwa kweso sengozi se-5. Kwiminyaka yakutshanje abantu sele beqhelekile kwiikhowudi zokusongela ngeengxelo zemozulu (ikhowudi ephuzi, ikhowudi ebomvu, njl.) Kwaye ngoku "ngokwenene".
Okwangoku, kukho iingxabano ukuba kwakukho isizathu sokucinga ngentshutshiso, kuba umntakwabo kaGökmen unokudibaniswa neklabhu yecalaphate yaseTurkey (yabona apha). Yiyo loo nto ukugcina ukudideka nokugcina umnyango uvulekile. Gökmen akukho buhlobo kunye namaxhoba, kukho enye imbambano yokhetho loloyiko (kodwa kutheni kubhekiswe ukuhlaselwa komntu we-1?). Ukongezelela, kukho (ngelo xesha akukho pasipoti) inqaku elifumaneka kwi-Renault Clio ukuba uGökmen wayesebenzisa ukuhamba. Quote RTL Nieuws: Kwi-Renault Clio ebomvu ukuba ummangali oyintloko uGökmen T. wasebenzisa emva kokuhlaselwa, kwafunyanwa inqaku eliza kubonisa oku, iNgxelo yeNkonzo yoTshutshiso kaRhulumente. "Ubume benkcazelo" kuya kuqinisekisa ukuba. U-Gökmen wayenqabile nge coke kwaye wayekhohliwe ukuthatha inqaku ebalulekileyo naye ekuxinzeleleni. Siza kubona oko kwenziwa yile kwakhona. Ngokuqinisekileyo siba nebali le ntombi eyazi uGökmen njenge-coke snorer kunye nokusasazwa Pauw & Jinek Wabonisa izolo umfanekiso womntu ongenakulinganisekanga owasebenzisa ezininzi iziyobisi kunye notywala. Kwaye ngoko yonke imbambano yeendaba iphendulwa kwintetho enokwenza ngokumalunga nokuba ingaxhatshazi, ngelixa iisistim ziye zavavanywa kakuhle ngosuku kwaye ukusetyenziswa kwamapolisa kwakhona kwaxutywa kuyo.
Uludwe lwekhonkco lovimba: ad.nl, rtlnieuws.nl, ad.nl, uu.nl, npostart.nl, nos.nl, volkskrant.nl, ekhanyayo.nl, geenstijl.nl, herhaling.nl
Ummeli ogwetywayo uGökmen Tanis wabanjwa, mhlawumbi umdlalo weentsapho
U-Mason Wells usinda kwi-3 ukuhlasela kwamaphekula kwaye uthetha okokuqala
Iindaba eziphambili ziyiindaba ezikhohlisayo iminyaka emininzi, kodwa sisetyenziselwa ukuba asiyikuyiqonda
tags: 24, hlaselwa, Daniel Molenaar, bulala, idrama, ngokwenene, eziziimbalasane, kalisa, Gökmen Tanis, UNicky van Grinsven, Oktobha, ulwalamano, amaxhoba, loyiko, ulwabilo, Utrecht
19 Matshi 2019 kwi-13: 44
Kuhle ukuba uphezulu phezulu. Thatha amakhoboka ngaphandle kweengxaki zabo. Kuya kuba nzima nangona kunjalo. Ingaba sele iyaziwa ngubani na ugqwetha kulo mzekelo? Igosa elineentlobo ezilungileyo kunye noRhulumente? Ngubani obandakanyeka rhoqo? Ihlawulela ukuba ngumhlobo kunye nelizwe.
19 Matshi 2019 kwi-13: 52
Ndingathanda ukuyibiza ngokuthi i-media hypnosis. Abantu baxhomekeka kwi-device ye-hypnosis eyazibeka phantsi kwe-hypnosis ngeengxabano kunye nemifanekiso (apho ukuhamba kunye nokuhamba kwindlela ebalulekileyo). Ngako-ke ukuguqula emva nangaphandle ngeendaba malunga nosongelo okanye iingxaki zobudlelwane njll. Ngako oko ijikelezo ezijikelezayo kwiindaba ze-NOS kunye nangemuva kwe-newsreader kunye ne-weatherman / ibhinqa.
Ubaxelela njani abantu phantsi kwe-hypnosis ukuba bayadla i-lemon elimuncu ngelixa i-hypnotist ibaxelela ukuba imango elamnandi? NgoRasti Rostelli, loo nto imnandi kakhulu, kodwa bambalwa ababona ebomini bokwenene ukuba sisifo se-hypnosis kwaye senziwa ngobomi bokwenene.
19 Matshi 2019 kwi-14: 06
Enyanisweni, uMilton Erickson, onguvulindlela onguvulindlela kwi-hypnosis, usebenze kanzima kuloo nto. Ukugqithisa ukuqonda ngokujongana nokungazi. Oku kwahlanjululwa kancinci yiTavistock kwaye ngokuqinisekileyo isetyenziswe ngabaxhasi abaqhelekileyo ukuba baxhomekeke kuluntu, kwiinjineli zenzululwazi (psychowash) kunye neengcali zabo zengqondo, cinga amatanki asebenza kwiinkonzo ezahlukeneyo, njl.
19 Matshi 2019 kwi-14: 18
Khawuxubushe oku kwinqanaba lekhofi, endaweni yenkxalabo okanye kwintsapho (awukwazi)
Inyaniso yokuba isiteshi seVimeo sivaliweyo kwisayithi esizimeleyo eNetherlands kubonisa ukuba ulawulo lokunyanzela lucula.
Iividiyo ezinqabileyo ezivela kwezinye iisayithi kunye nemifanekiso enyantisayo i-Vimeo kwaye masingakhulumi nakwii-funzige zisesayithi ze-porn, ezingagcina iziteshi.
Bonke bahlala kwi-intanethi zonke iziteshi ezinemifanekiso engcolileyo eyenza ubuchopho bakho bugule. Ngamanye amaxesha kunzima kakhulu abantwana ...
I-Vimeo isiteshi se-Heer Vrijland isuswe kwi-intanethi ngeli veki, ngaphandle kwesixwayiso njengoko yena ngokwakhe ubonise kwinqaku elidlulileyo.
Oku kungaphezulu kobubungqina bokuba siphila kulawulo lolawulo lobukhosi.
Abantu abasasazwayo abanegunya kufuneka baphinde banyulwe kwakhona kunye nento yonke (esikhundleni seqela lamaqela omboniso wezobupolitika) bavote onke amaapulo abonakele baseMedialand kwaye masenze unyulo malunga naloo nto, kuba siza ngoku siyazi ukuba ezopolitiko ) i-paws ukuya kwiJinek Pauw kunye neNieuwkerkjes ibonisa, iDe Media ihlamba ubuchopho bethu.
Bangabonisa iifilimu ezibonakalayo kwi-TV nakwi-intanethi
Kodwa i-Vrijland yeVimeo ishaneli isuswe ngokupheleleyo ngaphandle kwesaziso, ifanelekileyo kwilizwe lentando yesininzi, UNGAKUTHO
19 Matshi 2019 kwi-15: 26
Umsebenzi ophezulu kakhulu e-Utrecht udibene nokusebenza eNew Zealand. Ngoko ke ndikulindele ukuba imisebenzi efanayo kunye nokunyuka, ngokukodwa kwiNtshona, ekuqhubeni ukuya kwi-2023 kwiminyaka ezayo. Amajelo eendaba aya kuqinisekisa ukunyuka kwamaTurkey phakathi kwabantu.
19 Matshi 2019 kwi-15: 33
Yaye! Yaye le ncwadana iphuma kuphi na? Yintoni yokuyidelela yayiyi .. https://nos.nl/artikel/2164422-erdogan-waarschuwt-europeanen-jullie-zullen-niet-veilig-zijn.html
19 Matshi 2019 kwi-19: 31
@Iberi, idd Freemason Erdogan, izihlwele zidlala kwakhona. Imfazwe kaPike kufuneka ifike kwaye iza kuza ...
19 Matshi 2019 kwi-19: 40
I-1-2 phakathi kwama-Freemasons akusihlandlo yokuqala ... Xa uRutte eboleka isandla ngoncedo ngexesha lonyulo, u-Erdo wanyamekela ukunyuka, ngoko ngaba abazalwana
19 Matshi 2019 kwi-17: 47
Ndisazibuza ukuba i-18 Matshi yimini ekhethekileyo?
Iminyaka eyi-3 edlulileyo kwi-22 Matshi kwakukho ukuhlaselwa kweZaventem. Xa ndandifuna ukujonga emva kwalo mhla, ndafumana ibali elilandelayo elingacacileyo malunga nokuhlaselwa:
19 Matshi 2019 kwi-19: 37
Akukho-RTL Bertelsmann AG, uTanis wenza into egameni le-AIVD efungela u-Willy in
19 Matshi 2019 kwi-20: 13
Umfundi obalulekileyo wamaSilamsi othi izinto ezenzekayo emhlabeni jikelele zenzelwa ukuqhutyelwa kwimbambano yehlabathi ye-3 kwaye uthi i-Istanbul (eConstantinople) iya kudlala indima ephambili kulo. Ukwahlula kunye nokulawula ngoko .. lindela oko bakuza nabo ngoLwesihlanu i-22e, iBridge Bridge, iWest Coast e-USA? Ngubani oza kuthi ..
19 Matshi 2019 kwi-20: 23
Ngoko oko kusebenza kakuhle, eh, Trolongren, awuboni ukuba aba bakhonzi bakarhulumente banomdla obalaseleyo kubabastards ..?
"I-CTIVD ithumele isicelo kwiNdlu yabameli ngoNovemba ukuze iphinde ibone kwaye ixoxe ngolwazi olufihlakeleyo lukaRhulumente olusasazwa phakathi kwamazwe. Ngokunciphisa imfihlo, izinja ezilindi zokulinda zifuna ukulolonga iinkonzo zecala. "
20 Matshi 2019 kwi-10: 30
Ndimele ndihlekise okokuba ukuba iinkonzo zokhuseleko zibonisa ulwimi lwazo 'kubaphathi' nakumphathiswa. Ukongezelela, 'abaphathi' abafuni ukwazi yonke into kuba sele benolwazi lwezophulo-mthetho kwaye baya kuba neengqiqo kwezobugebengu, njl. Ngubani olawula 'abaphathi'? Umboniso wePopu.
19 Matshi 2019 kwi-21: 30
Kwakhona, umkhankaso wokuxhasa imali:
Marjoram wabhala wathi:
21 Matshi 2019 kwi-11: 27
Ngaba ubonile ukuba lo mntu uyinkwenkwe ngumlinganiselo weminwe yakhe? Abantu be-Transgender bawonke
19 Matshi 2019 kwi-21: 31
Umbala wentshebe omncinci (ifowuni yeparowol)
Manuel Chaguaceda wabhala wathi:
20 Matshi 2019 kwi-08: 23
Uhlalutyo olumnandi kakhulu kodwa masilinde ngesineke 'ingqungquthela enye' 😉
20 Matshi 2019 kwi-11: 51
"Ukuphepha kweemoto" kwakuvela kwintlekele! umoni obalekela ngokubhala ngokubhala incwadi "kubazalwana"? ngoko umoni ohlawula ibhilikhwe kunye nefowuni "yomhlobo"?
21 Matshi 2019 kwi-08: 46
Ngamanye amaxesha awukwazi ukuba kukho into engafanelekanga. Raid Trumanlaan. Umongameli waseMerika okanye iTransanshow? Ukuhlaselwa kweMosque kuKristuchurch. Mosque kunye neCawa kaKristu?
22 Matshi 2019 kwi-17: 21
22 Matshi 2019 kwi-20: 38
Ndiyabulela kakhulu, nangona ama-hoaxes anikezelwa ngamanzi amaninzi
Ukuhlalutya kwenza umqondo omkhulu kwaye iMedia / Power iyayesaba, imfutshane 18, i-35 ayinakufumana into ecacileyo
23 Matshi 2019 kwi-13: 04
Izigulane ezijolise ekubulaleni abantu abaninzi ngangokunokwenzeka zikhankanywe rhoqo. Lo ugqirha wabetha kwindawo elithulileyo, apho ungayi kulindela khona. Yintoni ekubethayo kukuba abayikubetha kwiqhosha leGay, Usuku lokukhunjulwa okanye uSuku loKumkani ngokomzekelo. Njengobungqina bobugorha uya kwenza izenzo zakho phakathi kwesihlwele. Njenga-Call of Duty, uyayifana ne-New Zealand psyop. Kwaye nangona uchasene nobuntu njengo-ISI, kutheni ungathathi isinyane samandla enyukliya? Ukutshintshela ukhuseleko, umqeshwa omnye oqala ukuphendulwa kwamakhenkce okanye mhlawumbi angenelela loo mpu. Kubonakala ukuba babenjenjalo ngemibhobho yeoli, kodwa oku kunokwenzeka nakwiinyawo zamaploni aphezulu kunye nokufakelwa okunjengeNuon. Kodwa ke ngokukhawuleza akukwenzeka. Ngethuba leholide leyo ingatshintsha ibe yintlungu engabonakaliyo, kufuneka ihlale ilawulwa ngenye indlela ayiyi kuhamba njengoko ihleliwe.
24 Matshi 2019 kwi-16: 01
Ngelishwa, loo nto igcinwe kuphela kwintsapho ethile ... izithethe kwi-obelisk
kulungile wabhala wathi:
24 Matshi 2019 kwi-11: 31
Into endibethayo yinto encinane kakhulu eyaziwa ngamaxhoba. Ngaphandle kwamaphephancwadi akwazi ukubhala ngoku. Apho imodeli esele ifile kwaye inqaku libhalwa malunga nemini, akukho nto ibhaliwe ngala "maxhoba". I-1 yayo yinto enye ye-19 oneminyaka eyi-Roos Verschuur. Kodwa xa ndiyi-Google leli gama, ndifumanisa phantse akukho nkcazelo ngaye. Unokulindela ukuba uneminyaka eyi-19 ubudala owazalwa waza wakhula ngexesha lobugcisa lisebenza kwi-Social Media. Ayikho i-akhawunti ye-Facebook, akukho akhawunti ye-instagram, akukho akhawunti ye-snapchat. Iifoto kuphela ozibonayo kwi-Google zizithombe ezenziwa ngamaphephandaba.
Akukho ziintombi ezithumela iifowuni kunye kunye neetekisi ezinjengokuba ndiya kukukhumbula njl njl njl njl njl.
okanye ndiyicinga ngokupheleleyo. Kodwa eli cala liyancipha kumacala onke.
24 Matshi 2019 kwi-11: 42
Akukho ukhangeleka kakuhle. Kodwa akunakwenzeka kuba abantu baxutywa ngamabali kunye nemifanekiso ngabantu ababeka iintyatyambo kunye nohambo oluthile (apho zonke iindlela zokufikelela zivaliwe. Imifanekiso inokukhwabanisa kalula isofthiwe yokuphindaphinda isihlwele .. ngubani oya kukwazi ukuyijonga)
Kufuneka kuqatshelwe ukuba le software yendlu yase-garden kunye nekhitshini apho wonke umntu angayilanda kwaye ayenze ngeeyure ezimbalwa zokusebenza. UJohn de Mol (ANP) unolwazi oluthile olungcono kuye:
24 Matshi 2019 kwi-15: 59
Umzekelo wawubizwa ngokuba yi-attack e-Amsterdam ..
24 Matshi 2019 kwi-21: 46
Oko ubhala kuchanekileyo. Kubuhlungu ngokucinga ngokuzimeleyo okuqhelekileyo kwesiDatshi. Liliphi ilizwe. Benza ntoni.
Hare wabhala wathi:
27 Matshi 2019 kwi-19: 06
Ingaba kukho ndawo, kwimbono ka-AD, ukuba 'yayingekho inhlonipho' kubaxhoba?
26 Matshi 2019 kwi-11: 58
Owe ukuze singakwazi ukuba ngubani, ngoko asikwazi ukujonga ukuba ikhona ngokwenene?
gronz23 wabhala wathi:
27 Matshi 2019 kwi-07: 58
Igama lakhe nguMelanie (AD), ngaba nabo bavakalisa? Ukwenza okungaqondakaliyo ngomntu, othe ngoko kubonakala ngathi ukhona emva kokunciphisa. I-Ms Martje Foundation isusile zonke iintlobo zemilayezo (apho ndibhekiselele kumlawuli wesiseko, uyise wayo) ... omnye umfazi uthetha ngoodade nomama kaRoos owayeya kuba khona. Unentsapho enhle, ngoko 'ummelwane ulungisa yonke into'. U-Dirk Kleppe (umlawuli) kunye nomngcwabo wengcwaba uRené Werner unomdluli wexesha elidlulileyo njengomcebisi wezemali .. UBawo René Verschuur unayo iFB kodwa kuphela i-1 enye i-Verschuur, uninakazi u-Lenie, ongenamanye ama-Verschuurs. Umfanekiso wesibini wokugqibela utata nentombi evela ku-2014 ....
27 Matshi 2019 kwi-22: 51
26 Matshi 2019 kwi-15: 08
Ewe, kutheni umgaqo 'wobumfihlo' uwamkelwa? Ukungazikhusela ummi, kodwa ukuze urhulumente angakwazi ukugcina ngokubanzi njengoko kukukholisa imfihlo evela kubantu abaqhelekileyo ukuba yintoni.
Ndiyabona ukuba ixhoba, ngoko ndiyimbiza, liqeshe igqwetha eliqhelekileyo lommeli. Yintoni abayaziyo apho bafumana khona ukuze iskripthi iqhubekeke?
« Ummeli ogwetywayo uGökmen Tanis wabanjwa, mhlawumbi umdlalo weentsapho
Iforamu yeTyard Baudet yeDemokhrasi (FvD) "Isiqwenga seMinerva sisasaza amaphiko alo" »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.149.932
Uhlaselo lobugwenxa beLondon, iManchester, iParis, iBarcelona kunye neRotterdam kwi-23 kunye ne-24 ngo-Okthobha?
Lace lesikhumba op I-PsyOp enzulu ye-"ghost" yokususa yonke inkululeko yakho kunye nokuzisa 'iingqondo zamapolisa' (inxalenye ye-2)
SandinG op I-PsyOp enzulu ye-"ghost" yokususa yonke inkululeko yakho kunye nokuzisa 'iingqondo zamapolisa' (inxalenye ye-2)
UMartin Vrijland op I-PsyOp enzulu ye-"ghost" yokususa yonke inkululeko yakho kunye nokuzisa 'iingqondo zamapolisa' (inxalenye ye-2)
Cubungula op I-PsyOp enzulu ye-"ghost" yokususa yonke inkululeko yakho kunye nokuzisa 'iingqondo zamapolisa' (inxalenye ye-2)
Joyina amanye ama-1.658 ababhalisile